အကြားအမြင်ရကျောင်းနှင့်အခမဲ့အကြားအမြင်ရအကူအညီ - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > အကြားအမြင်ရကျောင်းနှင့်အခမဲ့အကြားအမြင်ရအကူအညီ
Megan မတ်လ 23, 2017 ဗီဒီယိုများTagged အဘိဥာဏ်လအော adimmix, clairvoyance, အတန်းအစား, ကျောက်သလင်းကလေးများအဘိဥာဏ်စာအုပ်များ, အခမဲ့အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ချက်တင်, အခမဲ့အဘိဥာဏ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို, အခမဲ့အဘိဥာဏ်ကျောင်းက, အဘိဥာဏ်အသကျရှငျ, အဘိဥာဏ်အွန်လိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်, တိုက်ရိုက်လွှအကြားအမြင်, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းကိုချစ်, အဘိဥာဏ်ဖတ်ကိုချစ်, အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်, ဖုန်းကိုအဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ်အတန်း, အဘိဥာဏ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ, အဘိဥာဏ်လအော, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်း, အဘိဥာဏ်ဖတ်, အဘိဥာဏ်ကျောင်းက, အကြားအမြင်, ဝိညာဉ်ရေးရာအဘိဥာဏ်ဖတ်, ဝိညာဉျ, tarot, သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်စမ်းသပ်ရန်, အဘိဥာဏ်ဟာကြည်လင်ကလေးများ, သင်ခန်းစာa Comment ချန်ထား အကြားအမြင်ရကျောင်းနှင့်အခမဲ့အကြားအမြင်ရအကူအညီအပေါ်
အခမဲ့အကြားအမြင်ရအကူအညီနှင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့်အတူ http://psychics.co.uk/events/school.html ကနေအွန်လိုင်းအကြားအမြင်ရကျူတိုရီရယ်။ Beverley Hills, အမေရိကန်, ဆောက်သမ်တန်ဗြိတိန်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းတစ်အဘိဥာဏ်အလတ်စားဖြစ်လာရန်လေ့လာပါ။ အဆိုပါ Delphi အဘိဥာဏ်ချက်တင်ခန်းမှာလိုင်းပေါ်အဘိဥာဏ်ကျောင်းကမှအခမဲ့ဖတ်နှင့်အဘိဥာဏ်အကူအညီရယူပါ။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်ကျောင်းနှင့်ဘာဖြစ်သွားရှင်းပြဗီဒီယိုကို။ သငျသညျ, သင့်အဘိဥာဏ်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးသင့်ရဲ့ clairvoyance တစ်ခုသို့မဟုတ်အလတ်စားဖြစ်လာရန်လေ့လာသင်ယူလိုပါလျှင်ထို့နောက်အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ကျောင်းကသင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်လည်းဘယ်လိုနက္ခတ်ဗေဒင်, reiki သည်အနာပျောက်စေသောသို့မဟုတ်သဘာဝလွန်နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ကမ္ဘာနဲ့ပတျသကျတဲ့ဒဏ္ဍာရီများနှင့်နားလည်မှုလွဲမှားသင်ယူသည် tarot card တွေကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားပြသသောအတန်းရှိသည်။
အခမဲ့ချက်တင်ကအခန်းဧရိယာ၌သငျအကြောင်းအရာများဆွေးနွေးရန်သို့မဟုတ်အခမဲ့အဘိဥာဏ်ဖတ်ပေးဖို့အတွက် drop လိမ့်မယ်တော်မူသောငါတို့၏ဆရာ, ဆရာမများထံမှအခမဲ့အဘိဥာဏ်အကူအညီရ Cam ။
အဆိုပါအကြားအမြင်ရကျောင်း၎င်းအဘိဥာဏ်အလတ်စားအဘိဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အဘိဥာဏ်အိပ်မက်အနက်တွေအကြောင်းစာအုပ်တွေတစ်အရေအတွက်ရေးသားသူသောသူ Craig Hamilton က-က Parker အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာ join ဖို့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်ပြီးကျနော်တို့ဗြိတိန်အမေရိကနှင့်သြစတြေးလျရှိလူများအဘို့အစီစဉ်လူတန်းစားကြိမ်နှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှဧည့်သည်များလိုက်လျောညီထွေ။
နောက်ဆုံး Paranormal ဗီဒီယိုများအတွက် SUBSCRIBE!
ငါတို့နှင့်အတူအကြားအမြင်အလယ်အလတ် Read GET
ကျွန်ုပ်တို့၏ EMAIL ကိုစာရင်း SUBSCRIBE!
Google+ မှာ https://plus.google.com/+CraigHamiltonParker/posts ►
Facebook မှာ http://facebook.com/hamiltonparker ►
တွစ်တာ http://twitter.com/chamiltonparker ►
အကြားအမြင်ရမိသားစုအမေရိကန်နိုင်ငံ http://www.psychicfamily.com ►
http://psychics.co.uk ►အကြားအမြင် & အလယ်အလတ်ကွန်ယက်ဗြိတိန်